Laamaha amaanka ee dalalka Kenya iyo Uganda oo sheegay in ay jirto cabsi laga qabo Al-shabaab inta lagu guda jiro maalmaha Ciida. – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 On Jun 11, 2018
Hornafrik-Ciidamada amaanka ee dalalka Kenya iyo Yugaandha ayaa bilaabay dhaq dhaqaaq ciidan oo maalmahaan ay wadaan, kadib cabsi ay ka muuiinayaan weeraro ka dhaca dalalkaasi inta lagu guda jiro maalmaha ciida ah ee fooda nagu soo haya.
Saraakiisha ciidamada amaanka ee dalka Kenya ayaa sheegay in ay ciidamada dalkaasi ay ku howlan yihiin sidii ay u xaqiijin lahaayeen amaanka inta lagu jiro dabaal daga maalmaha ciida ah.
Waxaana Muslimiinta dalkaasi ku nool ay ka dalbadeen in ay ku garabsiiyaan xaqiijinta amaanka magaalooyinka dalkaasi, kadib markii ay soo baxday cabsi laga muujinayo in dagaalamayaasha Al-shabaab ay weeraro ka geystaan dalkaasi iyo dalka Ugandha oo iyagane ciidamadooda hiigan geliyay.
Magaalooyin Nairobi iyo Kambaala ayaa heegan la geliyay ciidamada amaanka inta lagu jiro dabaal daga maalmaha ciida ah, Al-shabaab ayaa dhowr jeer oo hore waxay weeraro ugu geysteen magaalooyin ka tirsan dalalkaasi.
Sidoo kale xuduudaha labada dal ayaa laga dareemayaa baaritaano dheeri ah oo ay booliska ku sameynayaa gadiidka iskaga gudaba dalalkasi.
Sidoo kale goobha ay dadka iskugu yimadaan aya alaga soo saaray digniino ku aadan dhaqaadhaq adadweynaha.
Xildhibaanada Hirshabeele oo joojiyay isticmaalka wadada isku xerta Muqdisho iyo Jowhar.